१ कोरिन्थी १४ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
१४ प्रेमको पछि लाग। साथै, परमेश्‍वरले दिनुहुने वरदानहरू जोसका साथ खोजिरहो तर विशेष गरी भविष्यवाणी गर्ने वरदान। २ जसले अरू भाषामा बोल्छ, उसले मानिसहरूसित होइन तर परमेश्‍वरसित बोल्छ, किनकि त्यो कसैले बुझ्दैन तर उसले पवित्र शक्‍तिद्वारा पवित्र रहस्यहरू बताउँछ। ३ तथापि, जसले भविष्यवाणी गर्छ, उसले आफ्नो बोलीद्वारा मानिसहरूको उत्थान गर्छ, प्रोत्साहन दिन्छ र सान्त्वना दिन्छ। ४ जसले अरू भाषामा बोल्छ, उसले आफ्नै उत्थान गर्छ तर जसले भविष्यवाणी गर्छ, उसले मण्डलीको उत्थान गर्छ। ५ तिमीहरू सबैले विभिन्‍न भाषाहरूमा बोल भन्‍ने म चाहन्छु तर अझ विशेष गरी भविष्यवाणी गर भन्‍ने म चाहन्छु। वास्तवमा, विभिन्‍न भाषाहरूमा बोल्नेभन्दा भविष्यवाणी गर्ने ठूलो हो, किनकि आफूले बोलेको भाषा उसले अनुवाद नगरेसम्म त्यसद्वारा मण्डलीको उत्थान हुँदैन। ६ तर भाइहरू हो, अहिले तिमीहरूकहाँ आएर मैले विभिन्‍न भाषामा बोलें तर परमेश्‍वरबाट पाएको सन्देश प्रकट गरिनँ वा केही ज्ञान दिइनँ वा केही भविष्यवाणी गरिनँ वा केही शिक्षा सिकाइनँ भने मबाट तिमीहरूलाई के फाइदा? ७ जस्तै, बाँसुरी वा वीणाजस्ता निर्जीव वस्तुले आवाज निकाल्दा सुरमा केही भिन्‍नता छुट्टिंदैन भने बाँसुरी वा वीणामा के धुन बजाएको हो कसरी थाह पाउने? ८ हुन पनि बिगुलले स्पष्ट आवाज दिएन भने युद्धको निम्ति को तयार होला? ९ त्यसैगरि, तिमीहरूको जिब्रोले पनि सजिलै बुझ्न नसकिने बोली बोल्यो भने के बोलेको हो कसरी थाह पाउने? वास्तवमा, तिमीहरू हावामा बोलिरहेका हुनेछौ। १० संसारमा धेरै किसिमका भाषा होलान्‌ तैपनि कुनै भाषा अर्थहीन हुँदैन। ११ यसकारण यदि बोलेको कुराको अर्थ मैले बुझिनँ भने त्यो बोल्ने मानिसको लागि म विदेशीजस्तो अनि मेरो लागि ऊ विदेशीजस्तो हुनेछ। १२ त्यसैले तिमीहरूले पनि पवित्र शक्‍तिका वरदानहरू पाउन तीव्र चाहना राखेकोले मण्डलीको उत्थानका लागि ती वरदानहरू प्रशस्त मात्रामा पाउने कोसिस गर। १३ त्यसकारण जसले अरू भाषामा बोल्छ, आफूले त्यो अनुवाद गर्न सकूँ भनेर उसले प्रार्थना गरोस्‌। १४ किनकि यदि मैले अर्को भाषामा प्रार्थना गरिरहेको छु भने मैले पाएको पवित्र शक्‍तिको वरदानद्वारा प्रार्थना गरिरहेको हुन्छु तर मेरो दिमागले भने त्यो बुझ्न सक्दैन। १५ त्यसोभए के गर्ने त? म पवित्र शक्‍तिको वरदानद्वारा प्रार्थना गर्नेछु तर म आफ्नो दिमागले पनि बुझेर गर्नेछु। म पवित्र शक्‍तिको वरदानद्वारा स्तुतिगान गाउनेछु तर म आफ्नो दिमागले पनि बुझेर गाउनेछु। १६ नत्र भने पवित्र शक्‍तिको वरदानद्वारा तिमीले आफ्नो प्रार्थनामा स्तुति चढाउँदा तिमीले के भनिरहेका छौ एक जना साधारण मानिसले बुझेकै छैन भने तिमीले चढाएको धन्यवादको प्रार्थनाको लागि उसले कसरी “आमिन” भन्‍ने? १७ हो, तिमीले राम्ररी धन्यवादको प्रार्थना चढाउँछौ तर त्यसद्वारा अर्को मानिसको उत्थान भने हुँदैन। १८ म परमेश्‍वरलाई धन्यवाद चढाउँछु कि तिमीहरू सबैले भन्दा म धेरै भाषामा बोल्छु। १९ यद्यपि, मण्डलीमा अरू भाषामा दस हजार शब्द बोल्नुभन्दा त आफ्नो दिमागले बुझेर पाँच शब्द बोल्नु नै मलाई बेस लाग्छ, ताकि अरूलाई मैले मौखिक निर्देशन दिन सकूँ। २० ए भाइहरू हो, समझशक्‍तिमा साना केटाकेटीहरू नहोओ तर खराबीमा बालकहरू होओ; बरु समझशक्‍तिमा पूरा बढेका मानिसहरू होओ। २१ मोशाको व्यवस्थामा लेखिएको छ: “ ‘विदेशीहरूको भाषामा र अपरिचितहरूको बोलीमा* म यी मानिसहरूसित बोल्नेछु, तैपनि तिनीहरूले मेरो कुरा सुन्‍नेछैनन्‌,’ यहोवा भन्‍नुहुन्छ।” २२ यसकारण, विभिन्‍न भाषाहरू विश्‍वास गर्नेहरूका निम्ति होइन तर विश्‍वास नगर्नेहरूका निम्ति चिन्ह हो। अर्कोतिर, भविष्यवाणीचाहिं विश्‍वास नगर्नेहरूका निम्ति होइन तर विश्‍वास गर्नेहरूका निम्ति चिन्ह हो। २३ त्यसकारण, यदि सम्पूर्ण मण्डली एकसाथ भेला भएर सबैले विभिन्‍न भाषाहरूमा बोलिरहेको बेला सर्वसाधारण वा विश्‍वास नगर्नेहरू त्यहाँ आए भने के तिनीहरूले तिमीहरूलाई पागल भन्दैनन्‌ र? २४ तर यदि तिमीहरू सबैले भविष्यवाणी गरिरहेको बेला विश्‍वास नगर्ने वा सर्वसाधारण कोही त्यहाँ आयो भने तिमीहरू सबैको वचनले उसलाई सुधार्छ, आफूलाई राम्ररी केलाउन प्रेरित गर्छ, २५ उसको मनमा भएका गोप्य कुराहरू प्रकट हुन्छन्‌ र घोप्टो परेर परमेश्‍वरको उपासना गर्दै उसले यसो भन्‍नेछ: “परमेश्‍वर साँच्चै तपाईंहरू माझ हुनुहुँदो रहेछ।” २६ भाइहरू हो, त्यसोभए के गर्ने त? तिमीहरू एकसाथ भेला हुँदा एक जनाले परमेश्‍वरको भजन गाउँछ, अर्कोले सिकाउँछ, अर्कोले परमेश्‍वरबाट पाएको सन्देश प्रकट गर्छ, अर्कोले विदेशी भाषामा बोल्छ अनि अर्कोले अर्थ खोलिदिन्छ। सबै कुरा एक-अर्काको उत्थानको निम्ति गर। २७ यदि कसैले अर्को भाषामा बोल्छ भने बढीमा दुई वा तीन जनाले मात्र बोलून्‌, त्यो पनि पालैसित; अनि कसैले त्यसको अनुवाद गरोस्‌। २८ तर यदि त्यहाँ कोही पनि अनुवादक छैन भने ऊ मण्डलीमा चुपचाप बसोस्‌ र मनमनै परमेश्‍वरसित बोलोस्‌। २९ साथै, दुई वा तीन जना भविष्यवक्‍ता बोलून्‌ अनि अरूले त्यसको अर्थ बुझून्‌। ३० तर यदि त्यहाँ बसिरहेको कसैले परमेश्‍वरबाट केही सन्देश पायो भने पहिलोचाहिं चुप लागोस्‌। ३१ तिमीहरू सबैले पालैसित भविष्यवाणी गर्न सक्छौ, ताकि सबैले सिकून्‌ र सबैले प्रोत्साहन पाऊन्‌। ३२ अनि पवित्र शक्‍तिद्वारा भविष्यवाणी गर्ने आफ्नो वरदानलाई भविष्यवक्‍ताहरूले काबूमा राखून्‌। ३३ किनकि परमेश्‍वर गोलमालका परमेश्‍वर होइन तर शान्तिका परमेश्‍वर हुनुहुन्छ। पवित्र जनहरूका सबै मण्डलीमा जस्तै ३४ स्त्रीहरू मण्डलीमा चुपचाप रहून्‌, किनकि तिनीहरूलाई बोल्ने अनुमति छैन तर मोशाको व्यवस्थाले पनि बताएझैं तिनीहरू अधीनमा रहून्‌। ३५ तर यदि तिनीहरू केही कुरा सिक्न चाहन्छन्‌ भने घरमा आ-आफ्नो पतिलाई नै ती सोधून्‌, किनकि स्त्रीको लागि मण्डलीमा बोल्नु अपमानजनक कुरा हो। ३६ के परमेश्‍वरको वचन तिमीहरूबाट निस्केको हो वा यो तिमीहरूसम्म पुगेको मात्र हो? ३७ यदि कसैले आफूलाई भविष्यवक्‍ता वा पवित्र शक्‍तिको वरदान पाएको मानिस ठान्छ भने मैले तिमीहरूलाई लेखेका यी कुराहरू उसले स्वीकारोस्‌, किनकि यी प्रभुकै आज्ञाहरू हुन्‌। ३८ तर यदि कोही अनजान रहन्छ भने अनजानै रहिरहोस्‌। ३९ यसकारण, मेरा भाइहरू हो, भविष्यवाणी गर्ने वरदान जोसका साथ खोजिरहो तर विभिन्‍न भाषामा बोल्नेहरूलाई पनि नरोक। ४० तर सबै कुरा शिष्टतासाथ अनि व्यवस्थित ढङ्‌गले होस्‌।
^ शाब्दिक, “ओठमा।”
१ कोरिन्थी १४